२४३ जनाको मृत्यु संगै १६,५९७ जना संक्रमित १,१८४जना निको भएर घरफर्के - Gulmeli Online TV
२४३ जनाको मृत्यु संगै १६,५९७ जना संक्रमित १,१८४जना निको भएर घरफर्के
५ चैत्र २०७८, शनिबार १४:५४
नारायण भण्डारी हङकङ १९ मार्च २०२२
आज हङकङमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक रुपमा घट्दै गैरहेको छ भने मृत्युहुनेहरुको संख्या भने बढिकहेको त्याङ्कले देखाएको छ।पछिल्लो २४ घन्टामा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्युहुनेहरुको संख्या २४३ जना रहेका छन भने संक्रमितहरुको संख्या १६ हजार ५९७ जना रहेको स्वास्थ्य विभागको सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्शन (CHP) का डा चुआङ शुक-क्वानले आजको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका छन।
आज संक्रमित हुनेहरुको कुल संख्या १६ हजार ५९७ जना रहेकोमा घरमै परिक्षण गरेर दर्ता गराउने हरुको संख्या ९०५९ जना रहेका छन भने न्युक्लिड एसिड परिक्षण मार्फत ७५२८ जनामा संक्रमण भएको हो। आजका केसहरुमा १४ जना आयातित हुन जुन ईन्डोनेसिया १३ र १ जना ईटाली बाट आएका थिए।
नयाँ पुष्टि भएका मध्ये १ हजार २ सय ७१ जना अस्पताल प्राधिकरणबाट, १ हजार १ सय ६७ जना स्वास्थ्य विभागको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट र बाँकी ५ हजार ९० जना निजी प्रयोगशाला वा सामुदायिक परीक्षण केन्द्रबाट पुष्टि भएका छन् । परीक्षण गरिएका १,१६७ मामिलाहरूमध्ये डेल्टा भेरियन्ट समावेश भएको कुनै पनि केस थिएन। १८५ केसहरू ओमिक्रोन भेरियन्टमा समावेश थिए जबकि लगभग १३३८ केसहरू अझै परीक्षण भइरहेको वा कम भाइरल लोडको कारण पत्ता लगाउन सकिएन।
पछिल्लो २४ घण्टामा १८२ मामिलासहित २४३ नयाँ मृत्यु भएको छ । यसअघि ६१ जनाको मृत्यु भएको थियो । पाँचौं लहरमा हालसम्म सार्वजनिक अस्पतालमा ५ हजार ४ सय १० जनाको मृत्यु भइसकेको छ
अनलाइन प्लेटफर्ममा RAT नतिजा घोषणा गर्ने बिरामीहरूलाई पहिले होम क्वारेन्टाइन आदेशहरू प्राप्त गर्न समस्या थियो। डा. चुआङले प्रणालीको समस्या समाधान भइसकेको र बिरामीले अहिले सम्म सहज रूपमा एसएमएस सूचना प्राप्त गर्न सक्ने बताए ।
अहिले पनि १० हजार ६२४ बिरामी अस्पतालमा भर्ना भइरहेको अस्पताल प्राधिकरणका डा लाउ का–हिनले बताए । हालसम्म ६३ जना बिरामीको अवस्था गम्भीर रहेको र तीमध्ये ११९ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । गम्भीर अवस्थामा रहेका ११९ बिरामीको अहिले सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा १८२ जना बिरामीको मृत्यु भएको छ । बिरामीहरूमा ३० देखि १०९ वर्षका १०३ पुरुष र ७९ महिलाहरू छन्। तिनीहरूमध्ये ९९ आवासीय हेरचाह गृहका थिए। जसमध्ये १२७ जनालाई खोप लगाइएको छैन । तीमध्ये ३ जनालाई ३ शट, २० जनालाई २ वटा खोप लगाइएको थियो भने ३२ जनालाई एउटा मात्रै खोप लगाइएको थियो ।
डा. लाउले यो पनि घोषणा गरे कि त्यहाँ कूल ६१ जना ढिलो रिपोर्ट गरिएका मृत्युहरू थिए जसमा ५१ र ९९ वर्ष बीचका ४३ पुरुष र १८ महिलाहरू थिए।
पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार १८४ जना निको भएका छन् । यसैबीच, भर्ना स्क्रिनिङका क्रममा १८ जनाभन्दा बढी बिरामीमा पोजेटिभ देखिएको छ भने ३० नजिकका सम्पर्कमा रहेकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने भएको छ ।
यसैबीच अस्पताल प्राधिकरणअन्तर्गतका १९ हजार २२३ भन्दा बढी कर्मचारीमा कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिएको छ । तीमध्ये १२ हजार २७७ निको भएर काममा फर्किएका छन् ।
सरकारले बितरण गर्नलागेको १० हजार डलरको कुपनको समस्याभएमा के गर्ने
भनभने (गुल्मी) संपर्क समाज रुपन्देहिको पाचौ अधिवेशन समपन्न